Ikhaya » IiNdaba zokuHamba ngeeNkcubeko » Ukumoshwa kokutya kufuna ingqalelo enkulu kuhambo nakwezokhenketho emva kwendyikityha yokufa
Ukumoshwa kokutya kufuna ingqalelo enkulu kuhambo nakwezokhenketho emva kwendyikityha yokufa
Olu konyuka kolwazi malunga nokutya kukunyusa uxinzelelo kwiinkampani ezisebenza kwicandelo lezokhenketho
Ukunciphisa okanye ukuphinda kusetyenziswe inkunkuma yokutya yinto ephambili ngenxa yobhubhane we-COVID-19
Amalinge akhoyo okwangoku ukulwa ukupheliswa kokutya kukhenketho awanelanga
Ukususa ii-buffets ezinkulu kwiihotele kungahamba indlela ende yokuphelisa ngokupheleleyo inkunkuma yokutya
Ngaphezulu nje kwesiqingatha sabaphenduli behlabathi kuvavanyo olutsha lweshishini bathe ukunciphisa okanye ukuphinda kusetyenziswe inkunkuma yokutya yinto ephambili kubo ngenxa yobhubhane we-COVID-19. Olu konyuka kolwazi malunga nokutya kungonyusa uxinzelelo kwiinkampani ezisebenza kwicandelo lokuhamba nelokhenketho.
Xa kuziwa kwimigaqo-nkqubo yendalo esingqongileyo, maninzi amanyathelo okujongana notshintsho lwemozulu kunye nokunciphisa ikhabhon, kodwa inqanaba elifanayo lokunikwa kwengqwalaselo alinikwa kumbandela oxinzelela ukwanda kokutya. Oku kunyusa iindleko zokusebenza ngokuthandwa ziihotele kunye nokwenza buthathaka iziqinisekiso eziluhlaza.
Amalinge akhoyo okwangoku ukulwa ukupheliswa kokutya kukhenketho awanelanga - ngakumbi xa ujonga indawo yokuhlala ngokukodwa. Njengomnye wemizekelo emininzi, uHilton uthembise ukunciphisa inkunkuma yokutya ngama-50%, kodwa kude kube ngo-2030, ixesha elide kakhulu.
kunye Covid-19 Ukutshabalalisa amazinga okuhlala kwabadlali abaninzi abaphambili kumzi-mveliso wokungenisa, ekujoliswe kuko kokusingqongileyo kufuneka kugqithiswe kwaye kuziswe ngaphambili. Ukususa ii-buffets ezinkulu kwiihotele, umzekelo, kungahamba indlela ende yokuphelisa ngokupheleleyo inkunkuma yokutya. Nangona kunjalo, xa amashishini esiba ziintlaba-zahlukane, kuyenziwa imiceli mngeni emitsha malunga nokuchitheka kokutya. Umzekelo, ukuvela koqoqosho lokwabelana kushishino lokulala kubeke uxanduva olukhulu emagxeni eendwendwe xa kufikwa kumba wokumoshwa kokutya. Inkunkuma kwindawo yabucala ayinakulawulwa ngokucokisekileyo njengoko inokwenzeka kwiihotele, njengoko inokuba nefuthe elibi kumava eendwendwe.